fibebahana Archives - Countdown to the Kingdom
Tag Archives: fibebahana
… Tsy ho afaka handresy ireo fitsapana ianao.
Simona - Azafady mba sokafy ny fonao
Avelao i Jesosy hiditra amin'ny fiainanao.
Valeria - Tonga ny fotoana
Tsy misy olona afaka miteny hoe: "Tsy fantatro".
… Fa inona no mijanona eo am-bavahady.
Edson Glauber - Mihantona amin'ny kofehy
Edson Glauber - Miverena amin'ny Tompo haingana araka izay tratra